Abadlali abamphoqanga u-Ertugral ukuba ahambe, kusho uKhoza | News24
Cape Town – USihlalo we-Orlando Pirates, u-Irvin Khoza, useyichithile imibiko yokuthi abadlali baleli qembu baba yisizathu sokuthi kusule isigubhukane umqeqeshi weqembu, uMuhsin Ertugral.
UKhoza wakuqinisekisa ukusula kwa-Ertugral, kulandela ukuthelwa ngehlazo kwePirates ngenkathi ibhaxatshulwa ngo-6-1, yiSuperSport United ngoLwesibili ebusuku, kodwa waphika ukuthi abadlali babe nesandla kulokhu.
“Sinenhlanhla kwi-Orlando Pirates ukuthi asikaze sibhekane nalokho.
“Uma sesibona lokho kwenzeka kumele wazi ukuthi kukhona okungahambi kahle ngalabo badlali,” uKhoza utshele iSowetan Live.
OLUNYE UDABA: Owe-Pirates uchaza ngokuthi kungani ayethanda iChiefs
Uqhuba uthi uma kungenzeka njalo bangaxhumana noNgqongqoshe noma uSomlomo wePhalamende ngoba lowo mdlali angabe efanelwe ukuba kwipolitiki.
“Ngoba uma ngabe uyiyeka izodala umdlavuza ozomosha iqembu. Futhi ngesinye isikhathi ungancamela ukubadedela bahambe bese uqala kabusha – ngisho noma ungenalo iqembu.
“Kodwa abadlali kufanele badlalele izizathu ezifanele futhi bangazibandakanyi namandla abadlali,” kuqhuba uKhoza engeza ngokuthi ngokujwayelekile lo mkhuba wenziwa abadlali abangenzi kahle, wathi kodwa uthemba ukuthi akusoze kwenzeka kuMabhakabhaka.
Kodwa-ke uKhoza akafunanga ukuphawula ngenkathi ebuzwa ngokuhluthukelwa yinhliziyo kwa-Ertugral, nokosolwa ukuthi yikhona okwaholela ekujikijelaneni ngamazwi phakathi kwalo mqeqeshi nomdlali wePirates, u-Edwin Gyimah.